Powder Sunifiram manta (314728-85-3) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Sunifiram (DM-235) vovoka dia karazana nootropics. Izy io dia fihenan-tsakafo tsy manam-paharoa an'ny piracetam miaraka amin'ny fahatsiarovana, fianarana, fanatsarana ny toe-po …… ..
Vovonam-borona Sunifiram (314728-85-3)
Ny vovon-tsolika Sunifiram, fantatra ihany koa amin'ny DM-235, dia fampivoarana vaovao mampientam-po amin'ny fampitomboana tsindrin-tsakafo. Izany dia mitovitovy amin'ny racetam nootropics amin'ny endriny saingy manodidina ny 1,000 fotoana mahery noho ny piracetam.
Ny poofa roapolo Sunifiram dia fantatra amin'ny asany amin'ny fanentanana ny asan'ny glutamate receptors ary amin'ny fampitomboana ny famokarana sy ny famoahana ny acetylcholine "neurotransmitter fianarana". Voalaza fa ny fihoaram-peon'ny Raw Sunifiram dia ampahany amin'ny ampakine, midika izany fa rehefa avy niampita ny Ny fiarovana amin'ny atidoha dia mifamatotra amin'ireo mpitsidika gluttamate AMPA amin'ny atidohany. Izany dia mamolavola ny famokarana glutamate, ny neurotransmitter tena ilaina izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampiasana tsy an-kijanona.
Glutamate dia mpandoro ny neurotranseran'ny firaka izay tena ilaina amin'ny plastika simapika, na ny fahaiza-miaina amin'ny kanseran'ny nerveo hamaly ny fampitomboana na ny fihenan'ny asa. Ny poofa Sunifiram roah dia heverina ho toy ny cholinergic, mampitombo ny famokarana sy ny famoahana ny acetylcholine neurotransmitter.
Rano Sunifiram roahina (314728-85-3) Specifications
Product Name Vovoka roapolo vita amin'ny Sunifiram
Anarana simika DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) propan-1-iray, Piperazine
Brand Name Vovonam-bovoka Sunifiram, DM-235
molekiolan'ny Formula C14H18N2O2
molekiolan'ny Wvalo 246.304 g / mol
mitsonika Point 98-100 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 4.5-6.5 ora
Solubility Airtight, maina sy ventilated
Application Hatsarao ny fahatsiarovana, hatsaraina ny fianarana ary mampihena ny fahatsapana fanaintainana, sns.
Sunifiram (DM-235) dia piperazine azo avy amin'ny zava-mahadomelina ampakine, toy ny racetam nootropics, fa ny 1,000 mahery kokoa noho ny piracetam. Tsy dia fikarohana firy momba azy io amin'izao fotoana izao, fa ny fandinihan-tsakafo voalohany dia manondro fa mety ho fihenam-bidy tena mahomby ary koa fitsaboana mety ho an'ny fahasamihafan'ny fahasalamana isan-karazany, anisan'izany ny aretin'i Alzheimer, ny aretin'i Parkinson, ary ny amnesia.
Ny Sunifiram dia nampidirin'ny mpahay siansa tao amin'ny Oniversiten'i Firenze tany Italia tamin'ny 2000 voalohany. Ny fikarohana dia maneho fa ny poofin'ny sunifiram dia mety hampirisihana ny hery sy ny fahatsapana ary ny herin'ny atidoha, eny fa na dia ao anaty dosie tena ambany aza.
Sunifiram powder (314728-85-3) Mekanisma amin'ny asa
Tsy fantatra ny fomba fiasan'ny sunifiram, saingy fantatra fa miasa izy amin'ny fanentanana ny asan'ny glutamate receptors ary amin'ny fampitomboana ny famokarana sy famoahana ny acetylcholine "neurotransmitter fianarana".
Sunifiram manandratra ny glutamate receptor, NMDA. Izany dia mampitombo ny taham-pahafatesana izay manome ny glutamate (ny neurotransmitter) dia atolotra eo amin'ny selan'ny ati-doha. Izany dia afaka manampy amin'ny famerenana ny fahatsiarovan-tsain-tsain'ny ati-damba na simba.
Ny poezia Sunifiram dia mampitombo ihany koa ny famokarana sy famoahana ny acetylcholine neurotransmitter. Ny aketylcholine dia mifandray akaiky amin'ny ankamaroan'ny zavatra fantatry ny saina, anisan'izany ny fahatsiarovan-tena, ny fianarana haingana sy ny fahaiza-manao, ary ny fahaiza-mamaky hafanana na ny fahafaha-mamaha olana maro samihafa tsy miankina amin'ny fitondrantena mianatra.
soa of Sunifiram powder (314728-85-3)
Manamafy ny fianarana sy ny fahatsiarovan-tena
Azonao atao ny manatsara ny fifantohan-tsaina, ny antony manosika, ary ny fahaiza-misaina
Fanatsarana maso sy fahitana
Mihamaro ny manao firaisana ara-nofo
soso-kevitra Sunifiram powder (314728-85-3) Dosage
Mifototra amin'ny fitambaran'ny mpampiasa sy ny fampahalalana azo avy amin'ny fianarana biby, ny dosage amin'ny 5-10 mg dia avo telo heny isaky ny isan'andro dia heverina ho azo antoka sy mahomby. Izany no tsara indrindra rehefa alefa ny dosie.
Amin'izao fotoana izao, dia toa tsy misy fiantraikany amin'ny voka-dratsin'ny sunifiram avy amin'ny fikarohana na fikarohana siantifika.
Ny vokatry ny fampitambarana ampiasain'ny mpampiasa dia kely sy tsy maharitra, ary mampiakatra ny mari-pahaizana amin'ny vatany, mitombo ny fahatsapana sy ny salam-panafody, ny aretin'andoha, ny fahasosorana an-jambany, ny fahatsapana ny fahatsapana amin'ny maso sy ny feo, ary ny tsy fahitan-tory. Fa zava-dehibe ny mahatsiaro fa tsy nisy fanadihadiana nataon'olombelona na fisedrana ara-pitsaboana.